Turkiga oo u digay boqortooyada Sacuudi Carabiya |
Turkiga (estvlive) 08/10/2018
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay haddii ay ku caddaato boqortooyada Sacuudi Carabiya inay dileen saxafigii la waayey , xilli uu booqanayey qunsuliyadda Sacuudigu uu ku leeyahay magaalada Istanbuul inuu xuman doono xiriirka kala dhaxeeya.
Erdogan , ayaa inta ku daray Sacuudiga inuu sidoo kale dilkan ku waayi doono xukuumadaha London, Washington iyo kuwa kale ee reer galbeed ah in ay dib uga fiirsadaan jacaylka ay u qabaan dhaxal sugaha Sucuudiga Mohamed bin Salman.
“Sawirka cusub ee Sucuudigu ma noqon doono mid isbeddel xambaarsan ee wuxuu noqon doonaa dal shirqool dil ka gaystay ciid dal ajanabi ah.” ayuu yiri madaxweynaha Turkiga oo ku tilmaamay arrinta ku saabsan saxafigii la waayey mid niyad jab ah.
Turkiga baaritaano horudhac ah oo u shaaciyay ayaa lugu sheegay in Suxufiga rugcadaaga ah ee Sucuudiga u dhashay,Jamal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda Sucuudiga shirqool kaas oo ay ka qayb qaateen ciidamada Sacuudiga ee sida gaarka ah u tababaran, kuwaas oo maydkii meesha ka saaray.
Jamal Khashoggi ayaa aaday qunsuliyadda uu dalkiisu ku leeyahay Istanbul Talaadadii lasoo dhaafay si uu uga soo qaato warqado la xiriira arooskiisa oo dhici lahaa.
Qunsuliyadda Sucuudiga ayaa si wayn u beenisay arintaas, ayadoo sheegtay in Mr Khashoggi uu dhismaha qunsuliyadda ka baxay Talaadadii.